Taorian'ny nahavitana "Lohataona feno" macOS Big Sur 11.3 RC dia navotsotra | Avy amin'ny mac aho
Rehefa vita ny "Spring load" dia navotsotra ny macOS Big Sur 11.3
Toni Cortes | | macOS Big Sur
Ora iray monja taorian'ny nifaranan'ny hetsika Apple, ary efa namoaka ny «Afaho ny mpifaninana»Amin'ireo rindrambaiko manaraka, na ho an'ny Mac na ho an'ny sisa fitaovan'ny orinasa.
Ary ny an'ny Mac dia ny kinova vaovao macOS Big Sur 11.3 RC. ny beta farany ho an'ny mpamorona alohan'ny fanombohana farany ho an'ireo mpampiasa azy rehetra, andrasana ao anatin'ny herinandro.
Rehefa avy namoaka kinova beta valo i Apple dia namoaka ny kinova "Kandidà famotsorana" an'ny macOS 11.3 ho an'ny mpamorona. Midika izany fa tsy hisy intsony ny beta, ary io ilay rindrambaiko vita mitovy ihany izay havoaka ho an'ny mpampiasa rehetra amin'ny herinandro ambony.
Ity kinova vaovao an'ny Big Sur ity dia manana safidy fanasokajiana vaovao ao amin'ny Reminders, fanohanana nivelatra ho an'ireo mpanara-maso console Xbox y PlayStation taranaka farany, playback mandeha ho azy ao amin'ny Apple Music ary lisitra vaovao lava.
Rehefa vita ny hetsika «Lohataona nitondra«, Apple dia nanamboatra macOS 11.3 RC ho an'ny mpamorona. Ny OTA dia tokony hiseho ao amin'ny System Preferences> Fanavaozana ny lozisialy raha miditra amin'ny programa beta developer ianao. Azonao atao koa ny misintona azy amin'ny tanana avy amin'ny tranokala developer Apple.
macOS Big Sur 11.3 misy safidy fanasokajiana vaovao ao amin'ny Reminders, ny fahaizana mametraka ny Output audio amin'ny stereo HomePods ho default, ary ny mifanentana amin'ireo mpanara-maso amin'ireo konsolan'ny Xbox sy PlayStation farany teo hahatratra ny tsena.
Misy koa fiasa miantoka fiantohana vaovao ao amin'ny fizarana About This Mac, fampiasa autoplay vaovao ao Apple Music izay nampiditra voalohany tao amin'ny iOS 14, ary ny fanovana sasany teo amin'ny menio fampidirana mikasika.
Ity kinova "Candidate famotsorana" ity no beta farany farany ho an'ny mpandraharaha. Ny kaody dia hitovy amin'ny kinova farany ho an'ny mpampiasa rehetra izay havoaka amin'ny herinandro ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Rehefa vita ny "Spring load" dia navotsotra ny macOS Big Sur 11.3
Vidiny sy fiasa amin'ny iPad Pro vaovao
Ny Apple TV 4K vaovao dia efa misy